Sida loogu daro kordhinta Chrome ee Microsoft Edge Chromium | War gadget
Ignacio Sala | | Kumbuyuutarro, Software
Microsoft waxay ku furtay Microsoft Edge Windows 10, oo ah biraawsar la yimid fikradda ah in Internet Explorer la iloobo, biraawsarkaas gacan bir ah ayuu ku xukumay dabayaaqadii 90-meeyadii ilaa 2012-kii, markii Google Chrome uu noqday biraawsarka ugu isticmaalka badan adduunka ee dhaafay Internet Explorer.
Markii sanadihii la soo dhaafay, xukunka Chrome wuu sii socday waxaana hada laga helaa ku dhowaad 3 ka mid ah 4 kombuyuutar oo ku xira internetka adoo adeegsanaya biraawsar. Edge, Microsoft ma doonayn oo keliya inay bogga u rogto Internet Explorer, laakiin sidoo kale way rabtay istaag Chrome. Laakiin kuma guuleysan.
Sanadihii ka dib, Microsoft waxay ogaatay inay wax qaldan yihiin. Dhibaatada ugu weyn ee Edge na soo bandhigtay, kuma helin kaliya waxqabadkeeda, laakiin sidoo kale kordhin la'aanta. In kasta oo ay run tahay in Edge uu la jaanqaadi karayay kordhinta, haddana tirada kuwani aad bay u koobnayd, aad bay u xaddidnayd haddii aan barbar dhigno tirada laga heli karo Chrome.
Xalka kaliya ayaa ahaa in laga dhiso biraawsar cusub xoqida, biraawsar cusub oo ku saleysan Chromium, isla mishiinka hadda laga heli karo labada Chrome iyo Opera labadaba tan iyo markii ay Firefox iyo Safari ee Apple labaduba adeegsadaan Gecko.
Bishii Janaayo 2020, Microsoft waxay sii deysay nooca ugu dambeeya ee 'Edge' cusub, oo ah biraawsar soo bandhigaya isbeddel aad muhiim u ah marka loo barbar dhigo noocii hore. Kaliya maaha inay ka dhakhso badan tahay, laakiin sidoo kale waxay na siisaa habab kala duwan si looga hortago raadinta ka iyo waa la jaan qaada dhammaan kordhinta in aan hadda ka heli karno gudaha Bakhaarka Webka Chrome.
1 Sida loo rakibo Microsoft Edge Chromium
2 Ku rakib kordhinta Microsoft Edge
3 Ku rakib kordhinta Chrome Microsoft Edge Chromium
4 Sida looga saaro kordhinta Microsoft Edge Chromium
Sida loo rakibo Microsoft Edge Chromium
Ahaanshaha nooc cusub oo Microsoft Edge ah, oo ah biraawsar ku dhex jira Windows 10, haddii aad cusboonaysiisay nuqulkaaga Windows 10, waxay u badan tahay inaad horey ugu rakibtay kumbuyuutarkaaga. Haddii kale, waad joogsan kartaa kaliya xiriirka rasmiga ah Si aad ugula soo degsato dammaanad buuxda, iskuxir oo aan ka helno bogga rasmiga ah ee Microsoft.
Xiriiriyaha, waxaad kala soo bixi kartaa labada nooc ee Windows 10, iyo nooca Windows 7 iyo Windows 8.1 iyo sidoo kale nooca loo yaqaan 'macOS'Maaddaama daabacaddan cusub ee 'Edge' ay la jaan qaadi karto dhammaan nidaamyada hawlgalka desktop-ka ee 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Markaan idhaahdo masuul, waxaan ula jeedaa inaad adigu leedahay ka digtoonow dhammaan boggaga internetka ee sheeganaya inay noo oggolaanayaan inaan soo dejino Microsoft Edge ka soo qaad adeegeyaashooda, sidii ay iyagu u yihiin mulkiilayaasha barnaamijka. Waa inaan ka digtoon nahay maxaa yeelay 99% waqtiga, barnaamijka rakibaadda waxaa ku jira codsiyo dhinac saddexaad ah oo rakibi doona haddii aynaan aqrin dhammaan tallaabooyinka la raacayo inta lagu jiro rakibidda.
Ku rakib kordhinta Microsoft Edge
Microsoft waxay na siineysaa taxane isdaba-marin ah oo u gaar ah oo ay weheliso soo saarista nooca cusub ee Edge ee ku saleysan Chromium, kordhinta aan ka heli karno Dukaanka Microsoft. Si aad uga soo gasho biraawsarka, waa inaan marin ka helnaa xulashooyinka qaabeynta adigoo gujinaya saddexda qodob ee jiifka ah ee ku yaal geeska midig ee kore ee biraawsarka iyo xulashada kordhinta.
Si aad uga soo gasho biraawsarka laftiisa qaybta Microsoft Store halkaasoo laga helayo kordhin, waa inaan tagnaa safka bidix oo aan gujino Ka hel kordhinta Microsoft Store.
Ka dib dhammaan fidinta tooska ah ee laga heli karo Microsoft ayaa la soo bandhigi doonaa, kordhinta taas waxay dhaafeen hubinta amniga ka socota Microsoft, sida dhammaan codsiyada laga heli karo dukaanka arjiga ee Microsoft. Sadarka bidix, waxaan kaheleynaa qaybaha codsiyada halka khaanadda saxda ah midkastoo u dhigma la muujiyo.
Si loo rakibo mid ka mid ah kordhintan, waa inaan gujino uun magaceeda, iyo riix badhanka Hel si ay si toos ah ugu rakibto nuqulkeena Microsoft Edge Chromium. Marka la rakibo, sida ay tahay labadaba Chrome iyo Firefox iyo inta kale ee daalacashada waxay u oggolaanayaan kordhinta in la rakibo, astaamihiisa ayaa la soo bandhigi doonaa dhamaadka baarka raadinta.
Ku rakib kordhinta Chrome Microsoft Edge Chromium
Si aan ugu rakibno kordhinta Chrome-ka qeybta cusub ee Microsoft Edge, waa inaan marka hore ka helnaa isla daaqadda aan ka rakibi karno kordhinta ay Microsoft lafteeda na siiso. Qeybta bidix ee hoose ee daaqadaas, waa inaan dhaqaajino badhanka U oggolow kordhinta dukaamada kale.
Markaan karti u yeelanno doorashadan, waxaan aadi karnaa Dukaanka Webka ee Chrome si loo helo loona rakibo kordhinta aan dooneyno inaan ku isticmaalno nuqulkeena ku saleysan Chromium-ka Microsoft Edge.
Xaaladdan oo kale, waxaan sii wadi doonnaa inaan ku dhejino kordhinta Netflix Party. Markaan kujirno bogga kordhinta, dhagsii Ku dar Chrome iyo waxaan xaqiijineynaa rakibida. Marka la rakibo, waxaan ka heli doonnaa dhamaadka sanduuqa raadinta. Uma baahnin inaan ku galno koonteena Google si aan ugu dhejino fidinta Edge Chromium.
Sida looga saaro kordhinta Microsoft Edge Chromium
Si loo baabi'iyo kordhinta aan horey ugu rakibnay Microsoft Edge, waa inaan marin u helnaa xulashooyinka qaabeynta oo aan galnaa qaybta Extensions. Qeybtaan gudaheeda, dhammaan kordhinta aan horay u rakibnay, ha ahaadaan kordhinta Microsoft u gaar ah ama kordhinta Kaydka Webka ee Chrome.
Nidaamka looga tirtirayo kombiyuutarkayagu waa isku mid, maaddaama ay tahay inaan kaliya u gudubno kordhinta si aan u tirtirno iyo dhagsii meesha ka saar (oo ku yaal meel ka hooseysa magaca kordhinta) isagoo xaqiijinaya tirtirka tallaabada xigta. Ikhtiyaar kale oo Edge Chromium uu na siiyo ayaa ah in barkinta la joojiyo.
Haddii aan joojino kordhinta, Tani waxay joojin doontaa ka shaqeynta biraawsarkayaga, astaanteeda lama soo bandhigi doono dhamaadka sanduuqa raadinta, laakiin wali waa la heli karaa si loo kiciyo markii aan u baahanno. Ikhtiyaarkan ayaa ku habboon in la tijaabiyo haddii mid ka mid ah kordhinta aan dhowaan ku rakibnay kombiyuutarkayagu uu sabab u yahay dhibaatooyinka la soo bandhigay.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid howsha, ha ka waaban inaad uga tagto faallooyinka iyo raalli ahaanshaha Waan kaa caawin doonaa inaad xalliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Sida loogu daro kordhinta Chrome ee Microsoft Edge Chromium
Kheyraadka aad awoodid inaad ku shaqaysatid